सङ्क्रमणकाल | मझेरी डट कम
ks — Sat, 01/14/2012 - 21:08
सङ्क्रमणकाल यस्तो सन्धिक्षण हो जसमा नयाँ आउने परिवर्तनको आशा हुन्छ र पुरानो व्यवस्था अन्त्यको पर्खाइमा हुन्छ । यो प्रसव पीडाजस्तो हो जसमा केही नयाँ कुरा प्राप्तिको आशाका साथै पीडा पनि हुन्छ । नयाँ कुरा प्राप्तिको कल्पनाले मन पुलकित हुनु यसको एउटा पाटो हो भने. पुरानो व्यवस्था फाल्दाको अप्ठेरो परिस्थिति अर्को पाटो हो । यो एक किसिमको द्वन्द हो जुन सङ्क्रमणकालग्रस्त हरेकले भोगिरहेको छ ।
समाज र राजनैतिक पद्धति परिवर्तनका हरेक मोडमा हामीले सङ्क्रमणकालका विभिन्न चरणहरूमा अप्ठेरा परिस्थितिहरूको सामना गरिसकेका छौँ । अझ भन्नुपर्दा सङ्क्रमणकालीन व्यक्ति नयाँ प्राप्तिका लागि आफ्ना सबै रहर र आकांक्षाहरूको बलिदान गर्ने महान् व्यक्तित्व हो जसले सकी नसकी नयाँ पुस्ताको सुख र समुन्नतिका लागि जीवन अर्पण गर्दछ ।
सङ्क्रमणकाल समाज र राष्ट्र रुपान्तरणको कोसेढुङ्गा पनि हो । समयको परिवर्तनले जनतामा ल्याएको चेतना र तत्सम्बन्धित आचरणले साना ठुला सङ्क्रमणकालहरूको सृजना र विघटन गरिरहेको हुन्छ । यसका निर्धारकहरूमा चेतना प्रमुख हो । सञ्चारको क्रान्तिबाट जब जनजीवनको चेतनाको क्षितिजले सबै राष्ट्रिय सीमा नाघेर भूमण्डलीकृत हुन्छ, तब त्यसले संसारका विभिन्न रहनसहन बुझ्छ । सही र गलतको पहिचान गर्न सक्दछ, विकासप्रतिको तृष्णा बढ्छ र मानिसहरूले आफ्नो व्यवहार र आचरणमा परिवर्तन ल्याई जीनवयापनमा गुणात्मक प्रगति ल्याउन चाहन्छ, तब नयाँ र पुरानो सोच, व्यवहार र मानसिकताको द्वन्द चर्किन्छ, नयाँ पुस्ता र पुरानो पुस्ताको बीचमा रिक्तता पैदा हुन जान्छ र समकालीन पुस्ताहरू सङ्क्रमणबाट ग्रस्त हुन्छन् ।
सङ्क्रमणकाल राजनीतिमा मात्र होइन, व्यक्ति, परिवार, समाज र राष्ट्रको जीवनमा पनि देखा पर्छ । व्यक्ति, परिवार, समाज र राष्ट्रको जीवनमा देखिने यस्तो संक्रमणले हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशको व्यक्तिगत, पारिवारिक र राष्ट्रिय संरचना नै उथलपुथल पार्न सक्छ । पुरानो मान्यता भताभुङ्ग हुन सक्छ यद्यपि पुराना मानिसहरू यसका बाधक भएर देखा पर्दछन् । पारिवारिक संरचना र सामाजिक मूल्यमा आएका परिवर्तनहरू कतिपय अवस्थामा अप्रिय र अनपेक्षित लाग्न सक्छन् । नेपाली परिवार र समाजकै उदाहरण लिने हो भने यहाँ परिवारहरू विखण्डन र विभाजनको पीडा खेप्न बाध्य भएका छन् । आजको नेपाली सङ्क्रमित परिवारका छोरा बुहारीहरू बूढा आमा बुवाको सेवा र स्याहार गरेर, घरमै ‘जे जस्तो भएको खाएर’ बस्दैनन् । पढेका बुहारीहरू रोजगारीमा हुन्छन् । रोजगारी नभएता पनि रोजगारीको खोजीमा अलग्ग एकल परिवारमा बस्न रुचाउँछन् । त्यसैले अहिलेका पुराना पुस्ताका आमा बुबाहरू एक्लोपनका सिकार भई असहाय भइरहेको देख्न पाइन्छन् । अहिलेका सासूहरू परम्परागत ‘सासू’ हुन पाएका छैनन् । आज पनि सबै काम भ्याएर बुहारीको जीवन बाँचिरहेका छन् । अहिलेका छोरा-बुहारीहरू उनीहरूका छोरा छोरीको उज्वल र सम्पन्न भविष्यका लागि कुनै खाडी राष्ट्रमा निकृष्ट स्तरको जीवन बाँचेर सङ्घर्ष गर्दैछन् कि त युरोप-अमेरिकामा मेसिन झैँ खटिरहेका छन् । त्यसो पनि नभएमा रोजगारी र सुखका नाममा अलग्ग रहेका छन् ।
पुरानो पुस्ता मात्रै नभएर आजको सिङ्गो युवापुस्ता पनि यसबाट अछुतो रहेको छैन । पलपल वञ्चितताको अनुभूतिबाट उदास रहने गरेको यो पुस्ता अशिक्षित र रुढीग्रस्त समयमा जन्मेको हो । वर्तमानको युवापुस्ता झोपडीमा जन्मियो, अभावमा बढ्यो र दुःखले पढ्यो । पढाइ बाहेकको समयमा गाई-वस्तुको स्याहार, जङ्गलसँगको प्रगाढ नातामा हुर्किएको यो पुस्ता वर्तमानको सहरीकरण र नयाँपुस्ताको आशा-आकांक्षा परिपूर्ति गर्न नौलो तरिकाको सङ्घर्ष गर्न बाध्य भएको छ । नयाँ नयाँ परिदृश्यमा सुहाउँदो प्रतिक्रिया जनाउन यो पुस्ता कहिलेकाहीँ चुक्छ । यसरी नयाँ पुस्ताको माग पूरा गर्न यो समय धौ धौ परेको स्थिति देखिन्छ ।
अहिलेका युवतीहरू पनि यो पीडा र द्वन्दबाट अलग रहेका छैनन् । आत्मनिर्भरताको ठुलो चुनौती स्वीकार्ने क्रममा उनीहरू जोखिमयुक्त काम गर्न पछि परेका छैनन् । महिलाले उनीहरूको ठोस् लक्ष्य नचिन्दा र कार्यविधि नजान्दा कति बेचिएका छन् भने कति पथभ्रष्ट भएर थप पीडा भोग्न बाध्य छन् । कयौँको जीवन बर्वाद भएको छ । यथोचित शैक्षिक स्तर, सामाजिक सुरक्षा र रोजगारीको व्यवस्था नभइसकेको यो अवस्था र अधिकार र स्वतन्त्रताको लागि लडाइँ चलेको यो सङ्क्रमणकालमा केहीको जीवनमा प्रगतिको सुनौलो बिहानी उदाए पनि अधिकांशको जीवनमा अन्धकार छाएको छ ।
राज्यको भूमिका यस क्षेत्रमा प्रमुख हुन्छ । राज्य बेकम्मा भएमा नागरिकले धेरै पीडा पाउने निश्चित छ । यदि राज्यले शिक्षा र रोजगारीको राम्रो बन्दोबस्त गरिदिने हो भने यो कालबाट खेप्नु पर्ने पीडा सहज भएर जान्छ । किनभने राज्यले गुणस्तरीय शिक्षा र योग्यता अनुसारको रोजगारीको व्यवस्था गरेको खण्डमा नागरिकले रोजगारी र गुणस्तरीय शिक्षाको लागि भौँतारिनु पर्ने अवस्था आउने छैन । जसले हाम्रा पारिवारिक र सामाजिक द्वन्द र पीडा न्यूनीकरण गराउन सक्छ ।
समय परिवर्तनको झापडले रन्थनिएका आजका सम्पूर्ण पुस्ताहरूले बाँच्नका लागि नयाँ छेउबाट अभ्यासमा जुटेको देखिन्छ । किनभने भूमण्डलीकृत भइरहेको यो नयाँ परिदृश्यमा संक्रमित व्यक्ति, परिवार, समाज र राष्ट्रको जीवनको नयाँ अभ्यास प्रारम्भ भइसकेको छ । समाजशास्त्रका विद्यार्थीहरूका लागि यो सङ्क्रमणकाल एक महत्वपूर्ण कालखण्ड हो । केही द्वन्द, केही आशा र केही निराशाको सङ्गम यो कालखण्ड साँच्चिकै विश्लेषणयोग्य छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । व्यक्ति, परिवार तथा समाजले यसप्रति गरेको प्रतिक्रिया आदि कुराले पनि यसको प्रभावकारिता निर्धारण गर्ने हुँदा यसको सूक्ष्म अध्ययनले योे भोलि कुन रुपमा विकसित हुन्छ र नयाँ नयाँ प्रविधिसँग यो परिवर्तनलाई जोडेर अध्ययन गर्दा भोलिका दिनमा समाज परिवर्तनको कस्तो रुप आउला भन्ने कुरा थाहा हुन सक्छ । जसले यही पुस्ता र आउने पुस्तालाई मार्गनिर्देशन गर्न पर्याप्त हुनेछ ।
नयाँ परिवर्तनलाई स्वागत गर्न हर कोही चाहन्छ । परिवर्तनलाई आत्मसात गरेर नै कुनै राष्ट्रले अग्रगति र प्रगति हासिल गर्न सक्छ । तर यसो भन्दैमा हाम्रो मौलिक परम्परागत मूल्य र मान्यतालाई भत्काएर, क्षतविक्षत पार्नु पनि अनुचित हुने कुरा यहाँ प्रासङ्गिक हुनेछ । हाम्रा अग्रजहरू जसले हरेक अप्ठेरा कालखण्डहरू पार गरेर आज हामीलाई चमत्कारपूर्ण दिनसम्म ल्याइपु¥याए, जसले.हरेक साना ठुला परिवर्तनलाई सहजै स्वीकारी अग्रगमनलाई स्थापित गर्न सहयोग गरे, ती अग्रजहरूलाई असहाय अनुभूत गराउनु हाम्रा लागि अनुचित हो । संसार अग्रगमन र प्रगतितर्फ लम्केको बेला कट्टर परम्परावादी बन्नु पनि अनुचित हुन्छ । त्यसैले. हामीले पुराना धरोहरहरूको संरक्षण गर्दै अघि बढ्नु पर्ने हुन्छ । कतै यो सङ्क्रमणकालले, यो परिवर्तनले हाम्रो परम्परागत पारिवारिक र सामाजिक संरचनाको आधारशिला नै तहसनहस नपारोस् - यतातिर पनि ध्यान दिँदै नयाँको स्वागत गर्नु यहाँ उत्तम हुनेछ भनी अभिमत दिन सकिन्छ ।
कति दिन चल्ने हो बाससँगको लडाईँ
सागर र किनारको साथ
जिउनुको रहर मर्दैछ मेरो
रुदिना र शिव प्रधान
किन फेरि एक्लै रमाउन खोज्छौ
तीन मुक्तक (दिन ढलेपछि)
प्रथम अनेसास च्याप्टर सम्मेलन एवं विश्व काव्य गोष्ठी २०१६
नेपाली साहित्यिक गतिविधिको सङ्क्षिप्त विवेचना
जताततै फोहोरमैलो दुर्गन्ध धेरै फ्यालफ्याल देखियो (गजल)